Dunida Fudud - Bogga 2 - Geofumadas
Warku waa jiraa, inkasta oo ay ahayd in ka badan sanad ka hor in qaabka kml loo tixgeliyey halbeeg ... xilligan la ansixiyay wuxuu dhaliyaa dhaleeceyn badan oo ku saabsan ujeedooyinka Google ee ah in la xakameeyo qaab qaab ahaan aad u wanaagsan. Hadda ha la yiraahdo kml wuxuu ku jiraa ...
Xaqiiqooyinka Google Earth
Joomatics-ka ayaa ah kuwa ugu halista badan Google Earth, sababtuna ma ahan hal-abuurnimo weyn laakiin maxaa yeelay dadka kale waxay u adeegsadaan ujeedooyin uusan qalabkani la kulmin qeexitaannada rabitaankeenna, laakiin waa inaan qiranno haddii codsigan uusan jirin, in yar waxyaabaha aan ka ogaan karno adduunka cabir ahaan juqraafi ahaan fudud. ...
Khariidadaha Google iyo Earth Virtual oo isku mid ah
Khariidadaha laba-geesoodka ah waa astaamaha ay marinnada Kanaalku hirgeliyeen, beddel ahaanna u yihiin kuwa leh baloog oo doonaya inay muujiyaan daaqad ay ku habboon yihiin aragtiyada Khariidadaha Google iyo Virtual Earth. Hal mar ayaan ka hadalnay bogagga qaar oo sidan oo kale u sameeya, sida Jonasson iyo Look Local. Kiiskan,…
Google Earth wuxuu hagaajin doonaa DTM iyo wax ka badan ...
Google waxay bilaabeysaa olole ay ku raadineyso xog dheeri ah, orthophotos, moodooyinka dhijitaalka ah ee dhulka, 3D moodooyinka dhismayaasha ... tani waxay badali kartaa fikirka ah in xogta Google Earth aysan waxtar u laheyn shaqo culus. Xaqiiqada ah in Google ay tahay kadib xogtaan sabab uma ahan oo kaliya tartanka ka dhanka ah Virtual Eath, laakiin xogta ...
Google Earth / Maps, Video, dalwaddii Earth
Google Earth iyo Earth Virtual, cusbooneysii xogta
Bilow wanaagsan Google Earth iyo Virtual Earth, oo sameeya xogtooda ugu horreysa sanadka 2008. Xaaladda Google Earth, waxay cusbooneysiisay lakabka dhulgariirka ee waqtiga dhow-dhabta ah ee USGS, iyo lakabka National Geographics. In kasta oo aysan xusin inay jiraan cusbooneysiinta sawirrada, kaliya lakabyada waddooyinka, ...
32 APIs Waxaa Laga Helaa Khariidadaha
Programaweb waxay leedahay xog ururin aad u wanaagsan, oo loo abaabulay loona qoondeeyay qaab masayr ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxay na tusaysaa API-yada laga heli karo mawduucyada khariidadaha, kuwaas oo illaa maanta ah 32. Tani waa liiska 32-da API ee laga heli karo websaydhka, hal dariiqo oo lagu cabbiro ayaa ah caannimadooda xaddiga ...
Muuqaal Muuqaal ah, horumarin weyn ee API Khariidad
Eeg gudaha waa tusaale cajiib ah oo waxa lagu dhisi karo dusha sare khariidadaha adeegyada API. Aan aragno sababta ay u tahay wax laga naxo: 1. Google, Yahoo iyo Virtual Earth oo isku cod ah. Xiriiriyaha sare waxaad ka dooran kartaa waxaad rabto inaad aragto, wiilkuna waa horumarkii ugu horreeyay ee ...
Geofumadas oo ku yaalla duulimaadkii Janaayo 2007
Ka mid ah baloogyada aan doorbido in aan akhriyo, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah mowduucyadii dhowaa ee loogu talagalay kuwa jecel in la cusbooneysiiyo. Kaartooraha iyo Khidmadda Bixinta Cilmiga Jooska ee ku saabsan mowduuca martigelinta vrs. Nidaamyada iyo khariidadaha adeegyada Tecnomaps Newsmap, iskudhafka mashiinka raadinta Yahoo iyo Googlemaps GIS User Win nuqul ka mid ah buugga "Bilaabidda ArcGIS Desktop" Google.dirson Las
Cartografia, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, tabo cusub, dalwaddii Earth
Kadib dhawr maalmood oo aan wax ka qorayay Google Earth, halkan waa soo koobid, inkasta oo ay adkayd in la sameeyo sababtoo ah warbixinnada falanqaynta, maxaa yeelay dadku waxay qoraan Google Heart, earth, erth, hert ... insluug guguler :) Geli xogta Google Earth Sida loo dhigo sawir ku jira Google Earth Draw oo u dir Google Earth Sida loogu daro faylka kml ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth
Ku xiridda ArcGIS Google Earth
Kahor intaanan ka hadlin sida loogu xiro Manifold Google Earth iyo gobalada kale ee dalwada, haddaba aan aragno sida loo sameeyo ArcGIS. Waqti ka hor, qaar badani waxay u maleeyeen in ESRI ay tahay inay hirgeliso kordhinta noocan ah, maahan oo keliya inay lacag haysato laakiin sidoo kale maxaa yeelay waa baahiyaha la dareemay ee adeegsadayaashooda. Qaarkood waxay u soo baxeen inay soo dejiyaan sawirrada, ...
ESRI Google Earth GPS KML GIS kala cayncayn ah mapserver
ArcGIS-ESRI, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth
Waxaa jira barnaamijyo kaladuwan oo lagu muujiyo laguna maareeyo khariidadaha, oo ay ku jiraan ArcGIS (Arcmap, Arcview), Manifold, CADcorp, AutoCAD, Microstation, heerka GIS, ka hor intaanan arag sida ay qaar faa'iidooyinka u helaan ... Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loogu xiro Manifold adeegyada muuqaalka Tani sidoo kale waa hab lagu soo dejiyo sawir si loogu kaydiyo qaab jaangooyooyin. Qoraal kale ayaan ku hadlayaa ...
ArcView Google Earth GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, dalwaddii Earth
Dunida casriga ah waxay cusbooneysiisaa sawirrada (Nofeembar 07)
Annagoo ku qanacsan weyn waxaan aragnaa cusbooneysiinta sawirrada dayax gacmeedka sare ee bishii Nofembar, ee Virtual Earth, sawirku wuxuu muujinayaa Mataró, halkaas oo uusan jirin sawir tayo leh. Kuwani waa meelaha la cusbooneysiiyey ee ku hadla Isbaanishka: (Eye Bird) Spain: Malaga, Alicante, Almeria, Collado Villalba, Cuenca, El Ejido, Guadalajara, Leon, Molina de Segura, Santiago ...
Haddii aan xiiseyneyno ogaanshaha aag, oo aan raadineyno sawirada dayax gacmeedka ugu fiican ama orthophoto, waxaa laga yaabaa inay nagu habboon tahay inaan ka raadinno labada ilo ee ugu isticmaalka badan: Google Earth iyo Virtual Earth. Hagaag, codsi ayaa laga sameeyay Jonasson, kaas oo aad ku arki karto labada daawade isla shaashadda, si toos ah ayaa loo wada shaqeeyaa. Tani waa…